Search Engine Optimization (SEO) Blog | Latest Internet Marketing News
Page တွေဘာကြောင့် Unlike လုပ်ခံရတာလဲ?
Facebook Page မှာ သင့်ရဲ့ Brand တွေကိုကြော်ငြာတာဟာ ထိရောက်တဲ့ Marketing နည်းလမ်း တစ်ခုဖြစ်သလို တစ်ဖက်မှာလည်း သင့် Brand ရဲ့ Page ကို Unlike လုပ်စေနိုင်တဲ့ အချက်တွေ ကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ကဲ ဒါဆို လူတွေဘာကြောင့် Unlike လုပ်ကျလဲဆိုတဲ့အချက်တွေ ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်…
၄၄% သော User တွေကတော့ Brand
Posted by Min Thuta/ Thursday May 27th, 2021/ Blog/0Comment
Facebook Page ထောင်ထားတဲ့ Business သမားတွေ သတိထားသင့်တဲ့ အချက်အချို့
Business တွေအတွက် Facebook Page က ထိရောက်တာမြန်တယ် ဆိုပေမဲ့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အခြေခံ အချက်တွေကို သတိထားသင့်ပါတယ်။ Facebook Business Page တွေအတွက်ဆောင်ရန် အချက်တွေကတော့…
-တင်တဲ့ Post တွေက Quality ကောင်းပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Post ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တင်တဲ့ Post က သင့်ရဲ့ Follower တွေနဲ့
Posted by Min Thuta/ Wednesday May 26th, 2021/ Blog/0Comment
ကိုယ့်ရဲ့ Facebook Profile ရှာလို့မရအောင် ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲ?
သင်ဟာ Social Media Platform တွေမှာ သိုသိုသိပ်သိပ် နေတတ်တဲ့သူ တစ်ယောက်လား? ဒါမှမဟုတ် သိုသိုနေချင်တယ် ဒါပေမယ့် နည်းလမ်းမသိ ဖြစ်နေပါသလား? ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာ မိတ်ဆွေတို့အတွက် အသုံးဝင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း တစ်ခုကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
ဒါကတော့ Search Engine ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Google နဲ့ Bing တို့မှာ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Facebook Profile
Posted by Min Thuta/ Tuesday May 25th, 2021/ Blog/0Comment
Content Writer/Copy Writer တွေအတွက် Essential Tools3ခု
Content တွေရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် Email ပို့တာ Report ရေးတာ စသဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်မှာရော တခြား Writing ပိုင်းရေးသားတဲ့ သူတွေ အထူးသဖြင့် English စာရေးရတဲ့ သူတွေမှာ တခါတလေ Grammar အမှားတွေ၊ Spelling အမှားတွေ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအခက်အခဲတွေကို တစ်ခုချင်းလိုက်ရှာပြီး စစ်ဆေးနေဖို့ ဆိုရင် အချိန်ပိုတွေကို ပေးရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အချိန်ကုန်သက်သာပြီးလွယ်ကူလျင်မြန်အောင်ဖြေရှင်းပေးမဲ့
Posted by Min Thuta/ Monday May 24th, 2021/ Blog/0Comment
အမြဲစောင့်ကြည့်နေသင့်တဲ့ Social Media Content Type များ
Social Media ကအမြဲတမ်း Update တွေနဲ့ ပြောင်းလဲနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုပဲ Social Media ပေါ်မှာအသုံးပြုမယ့် Content တွေကလည်း Trend အလိုက်ပြောင်းလဲနေတာလည်း ရှိပါတယ်။ Trend ဖြစ်လာတဲ့ အရာတစ်ခုကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် Stories တွေကို ကြည့်လို့ရပါတယ်။ Stories စပေါ်တုန်းက လူစိတ်ဝင်စားခြင်း သိပ်မရှိခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိအချိန်မှာ Stories တွေကို တော်တော်များများ
Posted by Min Thuta/ Sunday May 23rd, 2021/ Blog/0Comment
အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ကျင့်သုံးကြတဲ့ SMART Marketing Objective
ဒီတစ်ခါဖော်ပြမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ကျင့်သုံးလေ့ရှိကြတဲ့ SMART Marketing Objective ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
​ရည်ရွယ်ထားတဲ့ Target က လက်ရှိလက်တွေ့ပြဿနာတွေကိုရောဖြေရှင်းနိုင်ရဲ့လား ? လက်ရှိ Consumer တွေနဲ့သင့်တော်ရဲ့လား သိရှိပါစေ။
ဘာပဲလုပ်လုပ် Timing ကအရေးကြီးပါတယ်။ Deadline တွေကိုအတိအကျ သတ်မှတ်ထားရန်
Posted by Min Thuta/ Saturday May 22nd, 2021/ Blog/0Comment
Effective ဖြစ်စေမယ့် Social Media Strategy လိုအပ်ချက်အချို့
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို Social Media Platform တွေပေါ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အတွက်အသုံးပြုနေတယ် ဆိုရင်တော့ တိကျခိုင်မာတဲ့ Strategy ကောင်းတွေ ရှိဖို့လိုပါတယ်။ Strategy ကောင်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲ ဆုံးဖြတ်ချက် ချတာထက် အသင်းအဖွဲ့နဲ့ Brainstorming ကောင်းကောင်းလုပ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချတာက ပိုပြီးထိရောက်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကိစ္စတွေမှာ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်တွေကတော့…
Posted by Min Thuta/ Friday May 21st, 2021/ Blog/0Comment
Comic ဖတ်ရတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် အသုံးဝင်စေမယ့် Website များ
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Comic ဖတ်ရတာနှစ်သက်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် Website တွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ Comic တွေကို Online ပေါ်မှာ Free ဖတ်သွားနိုင်မယ့် Website တွေလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် မိတ်ဆွေတို့ စိတ်ဝင်စားမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Publisher ၇၅ ယောက်က Comic တွေကို Audience ဖတ်ရှုသွားနိုင်ဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံး Publish လုပ်ပေးနေတဲ့
Posted by Min Thuta/ Thursday May 20th, 2021/ Blog/0Comment
ဘာကြောင့် Facebook Ads တွေကို သုံးကြတာလဲ?
ခုခေတ်မှာ ဘာကြောင့် Facebook ကိုပိုက်ဆံပေးပြီး Ads တွေ Run လာကြတာလဲ? ယခုတစ်ခေါက် ဖော်ပြပေးမဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ Business တွေ Run ရာမှာ Facebook Ads တွေပါ သုံးပြီး ဘာကြောင့် Run လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်…
Facebook မှာ ကြော်ညာထည့်ခြင်းက လုပ်ငန်းတွေ၊ Customer ကောင်းတွေ၊ ရောင်းချမှုတွေ
Posted by Min Thuta/ Wednesday May 19th, 2021/ Blog/0Comment
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက ဘာကြောင့် Social Media ကိုသုံးကြတာလဲ?
Digital Marketing ထဲမှာပါတဲ့ Social Media Marketing ကတော့ ခေတ်ကိုလိုက်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းနီးပါး အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ ငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့ Traditional Marketing ကိုသုံးမယ့်အစား ငွေကုန်ကြေးကျနည်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ပိုပြီးရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတော်တော်များများ ဘာကြောင့် Social Media ကိုအသုံးပြုလာကြတာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေရှိပါတယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်တွေကတော့…
Brand Awareness ရရှိနှုန်း မြင့်တက်လာပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ လူဦးရေ တဝက်နီးပါဟာ
Posted by Min Thuta/ Tuesday May 18th, 2021/ Blog/0Comment